Delivery Policy - iSure Myanmar
Delivery FeesiSure တွင် ဝယ်ယူမှုများအားလုံးအတွက် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တွင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ပို့ဆောင်လို့ရသည့် မည်သည့်နေရာဒေသကိုမဆို သတ်မှတ်ကာလအတွင်းမှာ Delivery Free နဲ့ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။For every purchase from iSure will include Free Delivery service within the promotional period. Yangon, Mandalay and other possible delivery locations in Myanmar are in service.
Delivery Expressရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တွင်း မှာယူမှုများအတွက် For Yangon & Mandalay
iSure Delivery Service
(24hours Delivery Times)
Royal/MGL Delivery service
(1 to 2Days Delivery Times)
အခြားမြို့များမှဝယ်ယူမှုများအတွက် For Other Locations Royal/MGL Delivery Service အပြင် Request လုပ်ပါက လူကြီးမင်းပို့စေလိုသောကားဂိတ် Or အခြား Delivery Service ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ We are currently using delivery by Royal/MGL Delivery Service. Customers can also request any desired Express Gate or Delivery Service.
Delivery Timesနေ့တစ်နေ့ရဲ့ ၁၁နာရီမတိုင်ခင် မှာယူသော Order များအတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင်းနှင့် မန္တလေးမြို့တွင်းဆိုပါက ထိုနေ့တွင် ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြိး အခြားမြို့များအတွက်မူ ထိုနေ့တွင်ပင် Delivery Service အားအပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ (ငွေဝင်သည့် အချိန်သည် ၁၁နာရီကျော်ပါက နောက်တစ်နေ့မှ Delivery Service အပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်)For the orders purchased before 11AM, delivery will be done within that day for Yangon & Mandalay and we will send to Delivery Service within that day for other locations. (If the payment has been made after 11AM, we will send to Delivery Service on the next day)
For Yangon & Mandalay
(3 To5Days Delivery Times)
Mandalay & Others
ResponsibilityiSure မှဝယ်ယူပြီးလူကြီးမင်းထံပစ္စည်းရောက်သည်ထိ ပစ္စည်းအပျောက်အရှနှင့် အပျက်အစီးများကို iSure Company မှ ၁၀၀% တာဝန်ယူပေးသွားပါမည်။သို့သော် လူကြီးမင်း၏ Request ဖြင့် ပို့ပေးရသော ကားဂိတ် or အခြား Delivery Serivce များကိုမူ ထိုကားဂိတ် or Delivery Service Company ၏ Policy အားလူကြီးမင်းဘက်မှ လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ iSure Company will take 100% responsibility for any device damage from purchase made from the website to successful delivery. But the individual request for Express Gate or other Delivery Service will only depend on the respective Express Gate or Delivery Service Company policy.
နေ့တစ်နေ့ရဲ့ ၁၁နာရီမတိုင်ခင် မှာယူသော လူကြီးမင်း Order များကို ရန်ကုန်မြို့တွင်းနှင့် မန္တလေးမြို့တွင်းဆိုပါက ထိုနေ့အတွင်း နေ့ချင်းပြီးအရောက်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အခြားမြို့များအတွက်မူ ထိုနေ့တွင်ပင် သတ်မှတ်ထားသော Delivery Serviceအား အပ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တွင်း မှာယူမှုများအတွက်
24 Hours Delivery Times3to5Days Delivery Times
For all orders within YGN and MDY, orders will be shipped to customers within 24 hours if they are registered before 11 AM on the same day. For other locations, orders will be passed to the relevant logistics services withinaday.
Royal/MGL Delivery Services
24 Hours Delivery Times 1 to2Days Delivery Times
Royal/MGL Delivery Service အပြင် Request လုပ်ပါက လူကြီးမင်းပို့စေလိုသောကားဂိတ် Or အခြား Delivery Service ဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
We do provide delivery services nationwide by reliable logistic services such as Royal Express, MGL and other services or vehicles according to the customers’ preference.
iSure တွင် ဝယ်ယူမှုများအားလုံးအတွက် ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တွင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ပို့ဆောင်လို့ရသည့် မည်သည့်နေရာဒေသကိုမဆို ပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ဝယ်ယူမှု စုစုပေါင်း ၃ သိန်းအထက်ပိုပါက လူကြီးမင်း၏ ပို့ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ စုစုပေါင်း ၃သိန်း သို့မဟုတ် ၃သိန်း အောက် ဝယ်ယူမှုများအတွက်သတ်မှတ်ထားသော မြို့နယ်အလိုက် ပို့ဆောင်ခကောက်ခံပါမည်။
For every purchase from iSure will include Free Delivery service within the promotional period. Yangon, Mandalay and other possible delivery locations in Myanmar are in service.
အခုအခြေအနေအရပုံမှန်ထက်အချိန်ပိုကြန့်ကြာတာနဲ့ လမ်းခရီးမှာပစ္စည်းများ ဖောက်စစ်တာတွေရှိနေတာကြောင့် အဲ့လိုအခြေအနေများအတွက်တော့ တာဝန်ယူပေးလို့မရတာ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ပို့နေကျ ကားဂိတ်, အသိကားဂိတ်များရှိလို့ ကားဂိတ်သွားပို့ပေးရမယ်ဆိုလဲ သွားပို့ပေးပါသည်။ အဲ့အတွက်ကိုတော့ ကားဂိတ်ရောက်တဲ့ထိ တာဝန်ယူပြီးပို့ပေးပါသည်။ သို့သော် လူကြီးမင်း၏ Request ဖြင့် ပို့ပေးရသောကားဂိတ် or အခြား Delivery Serivce များကိုမူထိုကားဂိတ် or Delivery Service Company ၏ Policy အားလူကြီးမင်းဘက်မှ လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ကတော့ packing ကို သေချာလေးထုတ်ပိုပေးလိုက်မှာပါဖြစ်ပါသည်။
iSure Company will take 100% responsibility for any device damage from purchase made from the website to successful delivery. But the individual request for Express Gate or other Delivery Service will only depend on the respective Express Gate or Delivery Service Company policy.
လူကြီးမင်းမှာယူထားသည့် order များကို Tracking ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက် အောက်ပါ operator Hotline – 09969911666 (Operator No. 1)ကို ဆက်သွယ်ပေးဖို့ အကြံပေးချင်ပါသည်။
We suggest all our valued customers to phone our hotline to check the status of your order in case there are any delays. Hotline – 09969911666 (Operator No. 1)
Can change Delivery Address?
လူကြီးမင်း၏ Order ကို ပို့ဆောင်ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ပြီးသည်နှင့် သို့မဟုတ် ပေးပို့နေသည့်အချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးပို့ထားသည့်လိပ်စာကို ပြောင်းလဲ၍မရပါ။ လူကြီးမင်း order change လိုပါကကျွန်ုပ်တို့ကို 1 ရက် ကြိုတင်အကြောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါမည်။
Once your order is ready to be delivered, it is not allowed to make any last minute changes especially shipping address. If there is any changes, kindly let us know by one day before we continue the shipping process.
နေ့တစ်နေ့ရဲ့ ၁၁နာရီမတိုင်ခင် မှာယူသော လူကြီးမင်း Order များကို ရန်ကုန်မြို့တွင်းနှင့် မန္တလေးမြို့တွင်းဆိုပါက ထိုနေ့အတွင်း နေ့ချင်းပြီးအရောက်ပို့ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး အခြားမြို့များအတွက်မူ ထိုနေ့တွင်ပင် သတ်မှတ်ထားသော Delivery Serviceအား အပ်ပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။
To Delivery Address within Yangon and Mandalay
ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့တွင်း မှာယူမှုများအတွက် iSure logistics team မှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပို့ဆောင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပြီး သင့်ထံကုန်ပစ္စည်းအရောက် တာဝန်ယူပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
To Delivery Address out of Yangon and Mandalay
3 to5Days Delivery Times
Royal/MGL Delivery Service အပြင် Request လုပ်ပါက လူကြီးမင်း ပို့စေလိုသောကားဂိတ် Or အခြား Delivery Service ဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
သင် မှာယူထားသည့် Orderများကို မည်သို့Tracking ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။?
လူကြီးမင်း မှာယူထားသည့် order များကို Trackingပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက် အောက်ပါ operator Hotline – 09969911666 (Operator No. 1)ကို ဆက်သွယ်ပေးဖို့ အကြံပေးချင်ပါသည်။
You can also check your order status at Check Your Order.
Orderမှာယူပြီးသည့်အချိန်တွင် သင့်လိပ်စာကို ပြန်ချိန်းနိုင်သလား။?
ဘယ် delivery တွေ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသလဲ။?
လူကြီးမင်း Order များကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာပို့ဆောင်ပေးရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင်း မှာယူမှုများအတွက် iSure Logistic Team မှ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပို့ဆောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး နယ်မှ မှာယူမှုများအတွက်ကိုတော့ RoyalExpress , MGL Delivery Service များဖြင့်ပို့ဆောင်ပေးပါသည်။
Delivery ပို့ဆောင်ခ ဘယ်လောက်ကျသင့်မည်နည်း။?
iSure တွင်ဝယ်ယူမှုများအားလုံးအတွက်ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးမြို့တွင်းအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပို့ဆောင်လို့ရသည့်မည်သည့်နေရာဒေသကိုမဆိုပို့ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါသည်။လူကြီးမင်း၏ဝယ်ယူမှု စုစုပေါင်း ၃ သိန်းအထက်ပိုပါကလူကြီးမင်း၏ ပို့ဆောင်မှုကုန်ကျစရိတ်သည် အခမဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ၃သိန်း အောက်ဝယ်ယူမှုများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောမြို့နယ်အလိုက်ပို့ဆောင်ခကျသင့်ပါမည်။
သင့်Orderကို မည်သို့Cancel ပြုလုပ်နိုင်သနည်း။?
လူကြီးမင်း၏ Orderကို Order အတည်ပြုပြီးချိန်မှစ၍ ၂၄နာရီ အတွင်း ပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ Order ပယ်ဖျက်ရန်အတွက် Hotline – 09969911666 (Operator No. 1) ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့တွင်းနေ့တစ်နေ့ရဲ့ ၁၁နာရီမတိုင်ခင် မှာယူသောလူကြီးမင်းOrder များကို နေ့ချင်းအိမ်အရောက်ပို့ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ပေးမှာဖြစ်ပါသည်။
နယ် Customer များအတွက် အခုအခြေအနေအရ ပုံမှန်ထက်အချိန်ပိုကြန့်ကြာတာနဲ့ လမ်းခရီးမှာပစ္စည်းများ ဖောက်စစ်တာတွေ ရှိနေတာကြောင့် အဲ့လိုအခြေအနေများအတွက်တော့ တာဝန်ယူပေးလို့မရတာ နားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ ပို့နေကျ ကားဂိတ်, အသိကားဂိတ်များရှိလို့ ကားဂိတ်သွားပို့ပေးရမယ်ဆိုလဲ သွားပို့ပေးပါသည်။ အဲ့အတွက်ကိုတော့ ကားဂိတ်ရောက်တဲ့ထိ တာဝန်ယူပြီးပို့ပေးပါသည်။ သို့သော် လူကြီးမင်း၏ Request ဖြင့် ပို့ပေးရသောကားဂိတ် or အခြား Delivery Service များကိုမူထိုကားဂိတ် or Delivery Service Company ၏ Policy အားလူကြီးမင်းဘက်မှ လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘက်ကတော့ packing ကို သေချာလေးထုတ်ပိုးပေးလိုက်မှာပါဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသော သဘောသဘာဝကြောင့်၊ ဈေးနှုန်းများနှင့်ရရှိနိုင်မှုများကို အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ဝယ်ယူပြီး item များကိုပြန်လဲယူနိုင်ခွင့်မရှိပါ။ Orderမှာယူပြီး လူကြီးမင်းတို့ထံပစ္စည်းလက်ခံရရှိ၍ 24hour အတွင်း တစ်စုံတစ်ရာအဆင်မပြေမှုရှိပါကHotline – 09969911666 (Operator No. 1)ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။